ITUNES ကို: မှားယွင်းနေသည် 2009 - ITUNES ကို - 2019
ဆေးတစ်လက်မှားယွင်းနေသည် 2009 iTunes ကို
အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သို့မဟုတ်မဖွစျစေ, ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှားများသောအားဖြင့်သင်က၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေး၏တာဝန်ရိုးရှင်းဖို့ခွင့်ပြုသောထိုသူတို့၏ထူးခြားသောအရေအတွက်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သောအခါဤဆောင်းပါးတွင်အမှားကုဒ် 2009 အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အမှားကုဒ် 2009 တစ် restore သို့မဟုတ် upgrade စဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပေမည်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ဒီအမှား iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါက USB ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြဿနာများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသောအသုံးပြုသူဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာပါရည်ရွယ်ပါလိမ့်မည်။
အမှား 2009 ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများ
Method ကို 1: ကို USB-cable ကိုအစားထိုးပါ
USB-cable ကိုသငျသညျကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, အမှား, 2009 တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကို non-စစ်မှန်သောသုံးပြီး (နှင့်ပင်ကို Apple ကအသိအမှတ်ပြု) USB ကြိုးနေတယ်ဆိုရင်, မူရင်းနှင့်အတူကအစားထိုးသေချာပါစေ။ အကယ်. သင်၏မူရင်းကြိုးတွေပေါ်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိသည် - လှည့်ကွက်, kinks, ဓာတ်တိုး - ကိုလည်းမူရင်းနှင့်ကျိန်းသေတစ်ခုလုံးအပေါ် cable ကိုအစားထိုးဖို့သင့်ပါတယ်။
Method ကို 2: ကွဲပြားခြားနားသောက USB-port ကို device ကိုချိတ်ဆက်ပါ
အတော်လေးမကြာခဏ device ကိုနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာအကြားပဋိပက္ခကြောင့် USB port ကိုအံ့သောငှါထဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, သင်သည်အခြား USB မှတ်-port ကို device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာရှိပါကဥပမာ, ကစနစ်ယူနစ်၏နောက်ကျောဘက်မှာတော့ USB-port ကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကို USB 3.0 (ကအပြာရောင်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်) မသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။
သငျသညျ (ကီးဘုတ်ဆိပ်ကမ်းကိုဒါမှမဟုတ် USB-အချက်အချာသို့ built) USB မှတ်နှင့်အတူအပိုဆောင်းပစ္စည်းများမှ device ကိုချိတ်ဆက်ပါကလည်းကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်း, သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုဖွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
Method ကို 3: ကို USB နဲ့ချိတ်ဆက်အားလုံး devices တွေကိုပိတ်ထားပါ
(ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ် မှလွဲ. ) ကိုကို USB-port များမှကွန်ပျူတာနှင့်အခြားပစ္စည်းများမှ 2009 ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းမှုတစ်ခု iTunes ကိုအချိန်ဆိုပါက, သာ Apple က-connected device ကိုစွန့်ခွာ, သင်သည်ထိုသူတို့ကို turn off သေချာပါစေ။
Method ကို 4: DFU mode ကိုတဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူစက်ကို
အကယ်. အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းများကိုအဘယ်သူအားမျှနှင့်, အမှား, 2009 ဖြေရှင်းရန်မကူညီနိုင်မယ့်အထူး recovery mode ကို (DFU) မှတဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူစက်ကိုဖျော်ဖြေဖို့တစ်ဦးပါထိုက်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့လုံးဝ device ကိုကို turn off, ပြီးတော့ကို USB-cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာကချိတ်ဆက်ပါ။ iTunes ကိုဖွင့်ပါ။ device ကိုကိုပိတ်ထားပြီးကတည်းကပြုလုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ DFU mode ကိုစ gadget ကမိတ်ဆက်ပေးမလိုအဖြစ် iTunes ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမထားပါ။
DFU mode သို့သင့်ရဲ့ Apple က-device ကိုရိုက်ထည့်ရန်, gadget ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝါခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကျင်းပရန်နှင့်သုံးစက္ကန့်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ပါဝါခလုတ်ကိုလွှတ်မဟုတ်ပြီးနောက် "အိမ်" ကိုဆင်းကျင်းပရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးသော့ကို 10 စက္ကန့်ရောက်သည်ကိုင်ထားပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ရဲ့ device ကို iTunes ကဆုံးဖြတ်မပြုလုပ်များအတွက် "မူလစာမျက်နှာ" ကျင်းပရန်ဆက်လက်နေချိန်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
သင်သာဒီ feature ကိုတွေ့မြင်ဆိုလိုတာက recovery mode ကိုစ device ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုင်ဖုန်း Restore".
ထို့နောက် (ထို Apple က-ကွန်ပျူတာကနေ device ကို disconnect ကြဘူး) ကိုမျက်နှာပြင်အမှား 2009 ဖော်ပြပေးအခါခဏစောင့်ဆိုင်းခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ, အနီးကပ် iTunes နဲ့ပြန်ပရိုဂရမ်ကိုဖွင်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို restart ချလိုက်ပါ။ စည်းကမ်းအတိုင်း, ကိရိယာ၏ဒေတာဆယ်တင်ရေးစစ်ဆင်ရေးအမှားမရှိဘဲပြီးစီးပြီးနောက်။
Method ကို 5: အခြားကွန်ပျူတာဖို့ Apple ကကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ပါ
ဒါကြောင့် 2009 ခုနှစ်အမှားလျှင်ဖယ်ထုတ်ပစ်, သင်ထားဖို့လိုတဲ့ device ကို restore နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ထို့နောက်သင်ထည့်သွင်း iTunes ကိုနှင့်အတူအခြားကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးအောင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
သင်အမှားကုဒ် 2009 ဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုချက်များရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။